जसले जन्माए द नेक्स्ट टिम- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २, २०७४ मधु शाही
काठमाडौं — सानो कोठा, जसलाई उनीहरूले ‘म्याड हाउस’ नाम दिएका छन् । त्यही म्याड हाउसमा बस्छन्, ‘द नेक्स्ट टिम’ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न अस्ट्रेलिया पुगेका विद्यार्थीका लागि यति बेला ‘द नेक्स्ट टिम’ प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।
सन् २०१५ मा फिल्म ‘रेसम फिलिलि’ को गीत ‘जालमा...’ को कभर म्युजिक भिडियो बनाएर युट्युबमा राखेपछि ‘द नेक्स्ट टिम’ ह्वात्तै चर्चामा आएको थियो । त्यो गीतमा प्रयुक्त नेपाली र पश्चिमा शैलीको फ्युजन डान्स कोरियाग्राफीले निकै प्रशंसा पनि बटुलेको थियो । यही हौसलालाई कायम राख्दै नेपथ्यको ‘मै नाचेँ छमछमी...’, अल्मोडा राणाको ‘फन्टास्टिक...’ जस्ता चर्चित गीतको कभर भिडियो बनाएका उनीहरूले पछिल्लोपटक विश्व नेपालीको गीत ‘मीठो...’ माथि राम्रो काम गरेका छन् । यो भिडियोको भ्युअर्स संख्या झन्डै ३ लाख पुगिसकेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७४ १६:३८
काठमाडौं — चुनावको माहोल छ । सञ्चार माध्यमहरू मत परिणाम प्रसारण गर्न तल्लीन छन् । रेडियो, टीभी र पत्रपत्रिकातिर चुनावले ठूलो स्थान पाइरहेका बेला युट्युबमा चाहिँ के चलिरहेको होला ? न्यू मिडियाका रूपमा उदाइरहेको युट्युब यो बेला केका लागि प्रयोग भइरहेको छ ?
सोमबारको युट्युब ट्रेन्डले यी प्रश्नको जवाफ दिएको छ ।